अहिले नर्सिङ पेसामा चुनौती धेरै - सफल नेपाल
२०७९ असार १४ मंगलवार, ०६:४८
भर्ना हुनुपर्ने बिरामीले तत्काल बेड नपाउने, अपरेसनहरुका लागि लामो समय पर्खिनुपर्ने स्थिति पनि छ । शिक्षण अस्पताल भएका कारण यहाँ जनशक्तिको अभाव खड्किँदैन । बिरामीको चापसँगै डाक्टरहरु र नर्सिङ स्टाफहरु पनि थपिइरहेका हुन्छन् । तुलनात्मकरुपमा यस अस्पतालमा काम गर्नेहरुको पारिश्रमिक पनि राम्रै छ ।३९ वर्षदेखि नर्सिङ पेसा सम्हाल्नुभएकी कविता देवकोटालाई त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जका चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी, बिरामी मात्र नभई अस्पतालका हरेक कुना–कुनाको जानकारी छ ।देवकोटाले विगत २ वर्षदेखि त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा नर्सिङ निर्देशक पदको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ । उहाँसँगको सफल कुराकानीको सम्पादित अंश:
२०७९ जेष्ठ २६ गते सम्पादित l ०९:०४